Iziphumo zokukhangela “a” – Iphepha 2 – Geofumed
Ikhaya/Iziphumo zokukhangela ze: a
Iziphumo zophando ze: a
Le khosi ijolise kubasebenzisi abanomdla kwintsimi yoyilo lwesakhiwo, abafuna ukufunda izixhobo kunye neendlela ngokubanzi. Kwanakwabo bafuna ukuxhasa ulwazi lwabo, kuba balawula ngokuyinxenye isoftware kwaye bafuna ukufunda...
Uhlelo lwesithandathu lweMagazini ye-Twingeo lulapha, lunomxholo ongundoqo othi “Ukuvava okude: uqeqesho olufuna ukuzimisa kumzekelo wenyaniso yasezidolophini neyasemaphandleni”. Ukubhentsisa usetyenziso lwedatha efunyenwe ngemvakalelo ekude,...
U-Bhupinder Singh, owayenguMphathi weMveliso kwi-Bentley Systems, ejoyina iBhodi yaBalawuli baka Magnasoft
Njengoko umhlaba ulungiselela ukusinda kwihlabathi le-post-COVID, iMagnasoft, inkokeli kulwazi lwedijithali lwe-geospatial kunye neenkonzo ezinobukho eIndiya, e-UK nase-US, izisa iindaba ezikhuthazayo…
Wenza ntoni ijografi? Ixesha elide sasifuna ukuqhagamshelana ne-protagonist yolu dliwano-ndlebe. UGersón Beltrán uthethe noLaura García, inxalenye yeqela leGeofumadas kunye neTwingeo Magazine, ukunika imbono yakhe ngoku nakwikamva le…
Le khosi ijolise kubasebenzisi abanomdla kwintsimi yoyilo lomatshini, abafuna ukufunda izixhobo kunye neendlela ngokubanzi. Kwanakwabo bafuna ukuxhasa ulwazi lwabo, kuba balawula ngokuyinxenye isoftware kwaye bafuna ukufunda...
Le khosi ijolise kubasebenzisi abanomdla kwintsimi yokucwangcisa ukwakhiwa, abafuna ukufunda izixhobo kunye neendlela ngendlela ebanzi. Kwakwabo bafuna ukuxhasa ulwazi lwabo, kuba balawula ngokuyinxenye isoftware...
Le khosi ijolise kubasebenzisi abanomdla kwintsimi yemisebenzi yoluntu, abafuna ukufunda izixhobo kunye neendlela ngendlela edibeneyo. Kwanakwabo bafuna ukuxhasa ulwazi lwabo, kuba balawula ngokuyinxenye isoftware kwaye bafuna...
Le khosi ijolise kubasebenzisi abanomdla kwintsimi yoluvo olukude, abafuna ukufunda izixhobo kunye neendlela ngokubanzi. Kwanakwabo bafuna ukuxhasa ulwazi lwabo, kuba balawula ngokuyinxenye isoftware kwaye bafuna ukufunda...
Le khosi ijolise kubasebenzisi abanomdla kwintsimi yeeNkqubo zoLwazi lweJografi, abafuna ukufunda izixhobo kunye neendlela ngendlela edibeneyo. Kwakwabo bafuna ukuxhasa ulwazi lwabo, kuba balawula ngokuyinxenye isoftware kwaye...
Le khosi ijolise kubasebenzisi abanomdla kwintsimi ye-3D imodeli, abafuna ukufunda izixhobo kunye neendlela ngendlela ebanzi. Kwanakwabo bafuna ukuxhasa ulwazi lwabo, kuba balawula ngokuyinxenye isoftware kwaye bafuna ukufunda...
Yenza imifuziselo ye-BIM yofakelo lwemibhobho Into oya kuyifunda Sebenza ngentsebenziswano kwiiprojekthi zoluleko ezininzi ezibandakanya iiprojekthi zemibhobho Umzekelo weempawu zenkqubo yemibhobho Qonda ukusebenza okunengqiqo kweenkqubo ekuSetyenzisweni kweRevit...
Kule khosi siza kugxila ekusebenziseni izixhobo ze-Revit ezisinceda ekuqhubeni uhlalutyo lwamandla kwizakhiwo. Siza kubona indlela yokwazisa ulwazi lwamandla kwimodeli yethu kunye nendlela yokuthumela ngaphandle ulwazi oluxeliweyo kunyango...
IDiploma-Ingcali ye-BIM MEP
Le khosi ijolise kubasebenzisi abanomdla kwintsimi yoyilo lwe-electromechanical, abafuna ukufunda izixhobo kunye neendlela ngokubanzi. Kwanakwabo bafuna ukuxhasa ulwazi lwabo, kuba balawula ngokuyinxenye isoftware kwaye bafuna ukufunda...
I-Autodesk Inventor Nastran yinkqubo yokulinganisa amanani enamandla kwaye eyomeleleyo kwiingxaki zobunjineli. I-Nastran yinjini yesisombululo sendlela yento enomda, ebonwa kubuchwephesha bolwakhiwo. Kwaye akufuneki ukukhankanya amandla amakhulu ...
Le khosi ye-AulaGEO ifundisa ukusetyenziswa kwe-Revit ukwenza imodeli, ukuyila nokubala iinkqubo zombane. Uya kufunda ukusebenza ngokubambisana namanye amacandelo anxulumene noyilo kunye nokwakhiwa kwezakhiwo. Ngexesha lophuhliso lwekhosi...
Ikhasi langaphambili	kwiphepha elilandelayo